कसरी जवान देखिने ? – Himalaya TV
Home » समाचार » कसरी जवान देखिने ?
कसरी जवान देखिने ?
३० फाल्गुन २०७३, सोमबार २२:३४
काठमाण्डौ, ३० फाल्गुन । को मानिस होला, जो सधैं जवान देखिन नचाहोस् । आखिर जवान देखिने चाहना जो कोहीलाई पनि हुने गर्दछ ।
यसका लागि हामीले केही कुराहरुमा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी हुन्छ । हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ–
१. सन्तुलित भोजन
यो नै सबैभन्दा प्रमुख र विचार पुर्‍याउनु पर्ने कुरा हो । हिजोआज हाम्रो अस्वस्थ र असन्तुलित खानपानले गर्दा एकातिर रोगको सिकार र अर्काेतर्फ शारीरिक रुपमा दुर्बल हुन्छौं । सबैभन्दा त राम्रो शाकाहारी भोजन हो । यदि मांशहारी छौं भने नियन्त्रित रुपमा खानुपर्छ । अरु खानामा पनि चिल्लो र काब्रोहाइड्रेटको मात्रामा ख्याल गर्नुपर्छ । मदिरा र धुम्रपानको सेवन गर्नुहुँदैन ।
२. पानी खान कञ्जुस्याई नगर्ने
हाम्रो शरीरमा करिब ७० प्रतिशत मात्रा पानीको रहेको हुन्छ । यसले पनि पानी कति पिउन पर्छ भनेर बताउँछ । यसका साथै छालालाई स्वस्थ र आकर्षक राख्न पनि पानीको सेवनले मद्दत गर्छ । कम्तीमा दिनमा ४–५ लिटर पानी पिउनै पर्छ । हाम्रो शरीरमा भएका विषाक्त चीज पनि पिसाबबाट बाहिर जाने गर्दछ ।
३. नियमित व्यायाम–
नियमित व्यायाम अहिले आएर सबैको आवश्यकता बनिसकेको छ । व्यायाम गर्ने मानिस नै स्वस्थ र स्फूर्त देखिने गर्दछ । व्यायाम गर्दा हाम्रो शरीरमा उचित दबाब पुगेर शरीरका सबै अंग सक्रिय हुने गर्दछ र हामी जवान देखिने गर्दछौं ।
४. स्ट्रेसबाट मुक्त हुने–
विभिन्न समस्याको कारणले गर्दा हामी मनमा तनाव लिने गर्दछौं र त्यो हाम्रो लागि नै हानीकारक हुने गर्दछ । जसले गर्दा हाम्रो विभिन्न कोषहरु नष्ट हुने गर्दछ । अनि हाम्रो छाला चाउरिएको जस्तो देखिन थाल्छ ।
५.आयुर्वेदिक क्रिमहरु लगाउने–
विभिन्न आयुर्वेदिक क्रिमहरु अरु बजारमा पाइने भन्दा बढि लाभदायक हुन्छ । यसले अरु क्रिमले जस्तो साइड इफेक्ट गर्दैन । घरबाट घाममा निस्कनु पूर्व यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।